सेनाबाट गोर्खा सेनासँग युद्ध लडेको र पछि पराजित भएपछि…. | suryakhabar.com
Home पु.समाचार सेनाबाट गोर्खा सेनासँग युद्ध लडेको र पछि पराजित भएपछि….
सेनाबाट गोर्खा सेनासँग युद्ध लडेको र पछि पराजित भएपछि….
on: ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०७:३३ In: पु.समाचारTags: सेनाबाट गोर्खा सेनासँग युद्ध लडेको र पछि पराजित भएपछिNo Comments
मस्र्याङ्दी, लमजुङ । लमजुङमा निर्माण गरिएको सरदार भक्ति थापाको अर्धकदको शालिक अनावरण गरिएको छ । थापाको जन्मस्थल मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ ढगै बेँसीमा निर्माण गरिएको शालिक शनिबार एक कार्यक्रमबीच प्रदेश नं ४ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले अनावरण गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले राज्यले भक्ति थापाको योगदानको कदर गरेर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष रहेको बताए । वीर योद्धा थापाले पु¥याएको उच्च योगदानको कदर गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले वीर योद्धाकै कारण विश्वमा नेपाली (गोर्खाली)को शिर उच्च रहेको चर्चा गरे ।
देउथलमा अंग्रेजविरुद्ध तरबारसहित ३०० सेना लिएर युद्ध गरेका थापाको अंग्रेजको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । तर अंग्रेज सेनाले वीर गोर्खालीको संज्ञा दिँदै थापाको शवमा दोसल्ला ओढाएर सम्मानकासाथ अमरसिंह थापालाई बुझाएकाले पनि उनको इतिहास नेपालको गौरवसँग जोडिएको छ ।
Tags: सेनाबाट गोर्खा सेनासँग युद्ध लडेको र पछि पराजित भएपछि